INGOSI: Kucacile ukuthi uMaimane uyisicashalala sikaZille | News24
INGOSI: Kucacile ukuthi uMaimane uyisicashalala sikaZille
Durban - UHelen Zille wabhala ezinkundleni zokuxhumana ezwakalisa ukuthi akukhona konke okubi okwashiywa wuhulumeni wengcindezelo, nokuyinto eyacasula abaningi.
Akagcinanga lapho kodwa waqhubeka nokuthi abantu abacabanga ukuthi umbuso wontamolukhuni awunakho okuhle owakwenza, ngabe bacabanga ukuthi bebezoyitholaphi inqubo yezomthetho kanye nengqalasizinda yezokuthutha ehlelekile kanye namanzi atholakala kalula ehamba ngamapayipi?
Konke lokhu kukhuluma kwakhe wathi uyakumela futhi ngeke asatshiswe abantu ngoba uyazazi izizathu zakhe zokukhuluma kanjena.
Gwiqiqi useyaxolisa, uxolisela ukuthi kube njani?
Yini ngempela ayixolisayo uHelen, uxolisela ukuthi wabhala lokhu akubhala noma uxolisela ukuthi akubhala akuhlalanga kahle kubantu noma uxolisa ngoba nakhu kuthiwe akaxolise?
Yini ayixolisayo? Ngalokhu kuxolisa kwakhe kusho ukuthi usenovalo ngalokhu akusho noma uyenza nje?
OLUNYE UDABA:Ngiyaxolisa kakhulu, kusho uHelen Zille
Uqinisile lowo okhulumela i-ANC, uZizi Kodwa, uma ethi kuyacaca ukuthi uMmusi Maimane ufudumeza isihlalo sikaZille, akayilutho kuleli qembu, kodwa umholi wangempela nguZille futhi leli qembu libonisa ngokusobala ukuthi ngeke likwazi ukulaxaza umholi walo wangempela.
Impela uMaimane usidayisile singabantu abamnyama futhi wabonisa ngokusobala ukuthi akayazi nengcindezi ebhekene nabantu abansundu kuleli.
Kodwa ngimane ngiyasho nje, uzozazi kanjani izingqinamba zabantu abamnyama egane umlungu. Kuyacaca ukuthi uyena oganile, nakhu uhluleka ukuthatha izinqumo eziphusile ku-DA, uyisehluleki sendoda esingakwazi ukushaya phansi ngonyawo. Singamethemba kanjani ukuthi uyakwazi ke nje ukuthatha izinqumo emzini wakhe.
Wake wayizwa kuphi indaba yokuthi umuntu uzoxoshwa esigungwini esithatha izinqumo eqenjini kodwa futhi uzoqhubeka ngokuba wuNdunankulu wesifundazwe? Kanti oNdunankulu abazithathi yini izinqumo? Uzothathela bani izinqumo engasavumelekile ukuba athathe izinqumo eqenjini okuyilo eliphethe isifundazwe?
Disclaimer:INews24 iqhakambisa ukukhuluma ngokukhululeka nokuzwakaliswa kwemibono eyahlukene. Lokho kuchaza ukuthi imibono yababhali bezingosi eshicilelwe kuNews24, akuyona imibono yeNews24